Xeerka iyo Xigmadda Shiribka! Q10AAD W/Q: Xasan (Shiribmaal) | Laashin iyo Hal-abuur
Xeerka iyo Xigmadda Shiribka! Q10AAD W/Q: Xasan (Shiribmaal)
Haddii aan kasii wadno qoraalkeeni iyo faaqidaadii iyo falanqeyntii “Xeerka iyo Xikmadda Shiribka” maadaama aanay noo dhammaan tireyntii aan uga hadleeynay xeerarka loo maro Shiribka iyo inta Farac ama nooc ee uu u kala baxo macnaha inta hab ee loo curin karo, iyadoon sharcigiisana la jabineyn. Haddaba qeybtaan waxaanu kusoo qaadaneeynaa tiro ka duwan kuwii aan hore usoo qaadannay maadaama ay lahaayeen xad go’an iyo xeer aan la dhaafi karin. Tiradaani waa ka duwantahay, waana tireyn aan laheyn goob lagu istaajiyo iyo meel ay ku dhammaato in laashinku markaas meeshii uu damacsanyahay gaaristeeda uga haro maahane.
Waxayna u kala baxdaa laba farac, farac aad dhereyn karto, ilaa iyo intaa doonto oo lugood ka dhigi karto. Iyo farac aad gaabin karto laga bilaabo Afar lug ilaa toban lug, hadba inta laashinku kusoo koobo ujeeddadiisa. mana lahan magac u gaar ah ee hadba laashinka curinayo magaca uu ula baxo ayeey ku xirantahay, waxaa inta badan loo yaqaan “Shirib furan” waxaana ku soo qaadaneynaa dhowr Shirib oo midna dheeryahay, midna gaabanyahay, si aan u fahanno habka ay uga duwantahay Shiribyadii hore ee magaca lahaa, sida Seddex walxaat, Affar walxaat, Shan, Siddeed, sagaal, toban, ilaa Kabbo walxaat, ee aan hore ugasoo hadalnay! Ma aqaan laashinka bilaabay, waxayse ka mid tahay Shiribyada aan Goobaha iyo golaha laga sheegin ee casrigaan dambo soo shaac baxay kana mid ah Shiribyada aad loo adeegsado ama laashimiinto u curiyaan: haddaan kusoo qaato Faraca dheer waa “Shirib furan” oo aan anigu bilaabay waxaana ugu magac daray “Dareen Shacab” waana sida tan:
Waa deriskee haddeey dumaan
Daruuf hor leh ammaan degnaa?
Ammeey inya kusoo durgaan
Daayniile gobal soo degaan?
Dalkaan awal horoow dumee
Daadku amoow lasii degaa?
Debki holcaayay soddon daaw
Duful ammeey kusii daraan?
Waa duni dhinac loo duwee
Ammeey da, yarta duufsadaan?
Nin ku dirqaa ma daalayee
Deked hobyood ammeey degaan?
Daawyaa lasoo dadaalayee
Dabaq dhisnaay ammeey dunshaan?
Waa duul hammaa dhulkaan degnee
Diinsoorya xeeb ammeey degaan?
Dalkaan holcaahu waa dunyee
Dareen Shacab ammaan dignaa?
Mase inya ku daawanneey
Dib ka dib noogu soo gurgaan?
Dadkaan qaxee Denmaagya Jaad
Degay ammeey is dooriyaan?
Diin gaalo iyagoo duxaa
Ammeey dib noogu soo darmaan?
Dareen fog adigoo damqaa
Oon daalin danaheeyna sheeg?
Markoow derisku daaqsadeey
Nabaddu daafahaaga taal.!
Waxaa isla markiiba Silsillad ahaan u furay Jawaab deg deg ahna ka bixiyay Laashin Ibraahim Cali Asigoo i leh wel welkaas iyo dareenkaas iska saar hadda ayaa waddankeynii is raacayaahe Shiribkuna wuxuu ku socday waddanka Itoobiya oo markaas dagaal ka qarxay iyo cabsi iyo dareen shacabku qabay in ay nagusoo qaxaan intaas oo milyan naguna milmaan, yaanan aqris kugu daaline Laashin Ibraahim wuxuu yiri:
Waa deriskee miney dumaan
Dalkeenu waa dhalaa dalxiis
Dal dumay diris wow qaxyaa
Meheey degaanna woow daryeel
Dadkii dunshaa daba kecee
Dabbaal deg u diraar garow
Dadki shidow ku sii durgaa
Dad is diloo an diin leheyn
Xey duufshaan waa ku daadatee
Deked hobyood mineey degaan
Nin is dillaaya daahi maa
Nin soo degay waxma dunshee
Dib u dhis u diyaar garow
Damaacigoodi waa dunyoo
Dalkoodiyaan dad loo arkeen
Diriskaan kuu nexeyn dilkiis
How damqan waa dareem hellee
Dulli amxaaro is dilkeed
Daawowgu jirta dadka qaar
Danmaakya jaad dadkuu qaxeen
Doorsoon ku milma woow diraar
Kuwuu daneeya diinta gaal
Dalka haddeyba soo degeen
Dareen fog la daryeelimaa
Lagase daali maa digniin
Dagaalki daba dheerahaay
Dadki Shidaayay waa dummeen!
Duuduub warkee diraar garow
Daawo allaa digsoo dhahdee!
Markii Laashin ibraahin Cali Raage halkaa Soo dhigay laashimiin kale ayaa soo gashay aad ayuuna u dheeraaday, sidaa awgeed intaas ayaan uga kaaftoomeynnaa Faraca dheer. Waxaana u galeynaa Faraca gaaban macnaha Shirib aan badneyn ah, oo lasoo koobay laakin ujeeda fog xambaarsan, Haddaan ku bilaabo Shirib aan uga hadlayay Suuradaha Qur’aanka ku jira ee Xarafka”W” ka bilaawda ama wel weltirayaasha loo yaqaan wuxuuna u dhacay sida tan:
Wasaafaat maan kasoo wadee
Wadaariyaat iraa i waab!
Wadduur ku xeji waanadee
Wannajmi wehelkiisa yeel,
Wal mursalaad Wan-naazicaad
Weylun lil muda fifiin ku waab
Waa waanee is walaala yeel!
Wal fajri wala yaalinya
Washamsi Woow yadiisa Sheeg!
Wal-laayla walluxaa Xigtee,
Wattiina werintiisa sheeg,
Wal-caadiyaad waanaaga yaal
Wal-casri waa wakiillan yaa,
Weylun likulliyoon hal woow
Walaashaheeyna waa Wadaa!’
‘Waabaay dagaal mugeey waddaa
Werintu marna waa wanaag!
“Suuradaha Ka Bilaawda Xarafka “و” Ama “WOOW” Ee Ku jira Qur’aanka Kariimka ah Waa (17) Suuradood! Haddaan kusii xejiyo Shirib kale oo faraca gaaban ah wuxuu yiri: Laashin Ibraahim Cali Raage
Dhibaa jiroo waxbaa dhecee
Dhulkeena yaan u dhaarinaa?
Nin dhintay geelma dhaaniyee
Dhiigya cabaa Dadkaan dhibee
War gaal dhahaan dhegeysanee
Dhulkeena yaan u dhaarinaa??
Dhulkaan la qeybiyeey dhibee
Yaa dhiigle waa dhanaantehee?
Waxaan ku soo af xirayaa Shirib kale oo ka mid ah isla faracaan gaaban laakin wax badan koobaya waxaana curiyay Laashin Cabdinuur Xasan Cali(Waddani)
Nimaa dhalaa nimaa dhimmaa
Ninna aroos ayow dhigaa,
Nimaa dhacaa nimaa dhaxlaa
Ninna dhulkiisiyow dhummaa,
Nimaa dharsiin nimaa dherjaa
Ninna dhashiisu waa dhacsaal,
Nimaa dhunxaa nimaa dhammaa
Ninna hal toog is dhaafi maa,
dhurbeele waa adduun dhibkaas
dhankasta waaka dheelihaa,
Haddaba Shiribku xeerarkaas ama habkaas ayow u kala soocanyahay asigoo dhihitaan ahaan iyo dhedhen ahaanna is heysta sidaas ayuuna u koobaya arrar wax badan kugu qaadan laheyd dhihideeda waana in lagu dedaalaa adeegsigiisa maadaama uu ka mid yahay hantida la wada leeyahay iyo hidda suugaaneedkeenna wuxuu kaalin firfircoon ka qaataa horumarinta Afkeenna sidaa awgeed waa in lagu baraarugsanaadaa macaantiisa iyo awooddiisa Shiribka. la soco qeybaha xiga haddii Eebbe idmo.
W/Q: Xasan Cabdulle Calasoow(Shiribmaal)